Mapurisa Anoperekedza Joseph
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bengali Bislama Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kamba Kannada Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Lingala Lithuanian Luganda Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mingrelian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Pangasinan Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Telugu Thai Tigrinya Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Mapurisa Anoperekedza Joseph
Kana uri Chapupu chaJehovha, imbozvifungidzira uchiparidza paimba neimba uine mapurisa? Ndizvo zvakaitika kuna Joseph kuMicronesia muna 2017. Iye nezvimwe Zvapupu zvitatu vakanga vachiita mushandirapamwe wekuparidzira vanhu muzvitsuwa zviri kure.
Paakanga ava masikati, vakasvika pane chimwe chitsuwa chinogara vanhu vanenge 600 vachibva vagamuchirwa nameya wechitsuwa chacho. Joseph anotsanangura zvakazoitika: “Meya wacho akati taigona kuperekedzwa nemota yemapurisa kudzimba dzese. Takashamiswa nezvaakataura, tichibva tamutsanangurira zvakanaka kuti aiwa zvakanga zvisingaiti. Taida kuita zvatinongoita mazuva ese patinoparidzira vanhu mudzimba dzavo.”
Vaparidzi vacho vakabva vatanga kufamba netsoka, vaine shungu dzekutaura nevanhu vakawanda. Zvapupu zvacho zvakati: “Vanhu vaitigamuchira zvakanaka uye vaida kunzwa shoko redu. Izvi zvakaita kuti tipedze nguva yakawanda kupfuura yatinowanzopedzera paimba imwe neimwe.”
Zuva rava kunodoka, mota yemapurisa yakapfuura nepana Joseph kaviri, uye kechitatu yakabva yamira. Mapurisa acho akamubvunza kana aida kutakurwa nemota vachimuendesa kudzimba dzaakanga asati aparidzira. Joseph anoti: “Ndakaramba. Asi vakaramba vachisimbirira, vachiti, ‘Masarirwa nenguva shoma kuti mupedzise dzimba dzese idzi dzasara.’ Ndakabva ndazongobvuma nekuti zvechokwadi dzimba dzakanga dzichiripo. Pataisvika paimba imwe neimwe, mapurisa acho aindiudza zita revanogara pamba pacho uye vaiti kana pakasauya munhu kuzovhura dhoo, vaizoridza bhero remota.”
“Saka takakwanisa kupedza dzimba dzese musi iwoyo. Takasiya mabhuku akawanda uye takaronga kuzodzoka kuvanhu vainge vafarira.”
Mapurisa akaudza Joseph kuti “vakanakidzwa nekuudza vanhu mashoko akanaka.” Zvapupu zvacho pazvakazoenda zuva ranyura, mapurisa akavabhabhaisa achinyemwerera akabata mabhuku eBhaibheri.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mapurisa Anoperekedza Joseph
ijwex nyaya 4